Dr. Tint Swe's Writings: Scars အနာအမာရွတ် စာအမာရွတ်
၁။ ဆရာရှင် မင်္ဂလာပါနော် ကျမအသက် ၂၅ နှစ်ပါဆရာ ခြေထောက်မှာ ဒီလို အနာလေးဖြစ်တာ ၂ လ လောက် ရှိပါပြီ ခြင်ကိုက်တာကနေစတာပါ အခုသနပ်ခါးနဲ့နည်း၂ ဖုံးထားလို ပါ မဲနေပါတယ် အနာက ဆီးချို တော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ လောက်က စစ်ဖူးတာ မရှိပါဘူး အပျိူ ပါဆရာ အနာကဖေးကို မကြာခဏလည်း ကုတ်မိပါတယ်ဆရာ ကူညီပါအုံး ဘာဆေးနဲ့ ဘယ်ဟာလိမ်းရမလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးပါနော်ဆရာ။
စိုးရိမ်စရာ မရှိလောက်။ နည်း၂ လို့ရေးတာမျိုးကိုလည်း ခဏခဏပြောပါတယ်။ နည်းနံပတ် ၂ လား စဉ်းစားရတယ်။ ရရစ်မပါတဲ့ ပြီကိုလည်းပြင်လိုက်တယ်။ ဆရာဝန်ဆီစာရေးရာမှာ နော်လို့ မသုံးတာကပိုပြီး သင့်မြတ်ပါတယ်။
၂။ ဆရာ အမာရွက်ပျောက်ဆေး ကောင်းတာလေး လမ်းညွှန်ပေးပါ။ အမာရွက်တွေနဲ့ ခြေထောက်မှာ ကြည့်ရတာ မကောင်းလို့ လမ်းညွှန်ပေးပါအုန်းဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍။
အသက် ၂၀ မိန်းမကလေး။ ငယ်ငယ်ကအမာရွတ်လေးတွေ ပျောက်ချင်လို့။
၃။ ဆရာရှင့် unity city က green tea oil က အမာရွတ်အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ သုံးသင့်ပါသလားဆရာ။ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလားရှင်။
ကြော်ငြာဆေးသာဖြစ်တယ်။ အဲတာ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ အတူတူပဲ။ အဲလိုဖြေရတိုင်း အားနာစရာတွေရှိတာ သိပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုဆရာရှင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်အကြီးတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဆေးလေးညွှန်ပေးပါဦးဆရာ။ အမာရွတ်တွေ အရမ်းကိုများနေပါတယ်ဆရာ။ မျက်နှာတပြင်လုံးပါပဲ ဆရာ။
အမာရွတ်ပျောက်ဆေးဆိုတာ မရှိပါ။ အမာရွတ်ပျောက်ဆေးကြော်ငြာ မယုံသင့်ပါ။ အရိုးကျိုးတာဆက်တဲ့ဆေး မရှိပါ။
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပျက်စီးကျိုးပဲ့သွားတာတိုင်းက အလိုလိုပြန်ပြင်တယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကတော့ အသစ်ပြန်မဖြစ်စေပါ။ အရေပြား၊ အဆီ၊ ကြွက်သား၊ အရိုး၊ အားလုံး အသစ်အစားထိုးပါတယ်။
ထိခိုက်မိတာနဲ့ အနာကျက်ဖြစ်စဉ်တခါတည်း ဝင်လာတယ်။ ထိခိုက်ပျက်စီးတာကို အနေအထားတည့်အောင် ပြင်ပေးဘို့ လိုရင် လုပ်ပေးရတယ်။ လုပ်မပေးရင် အဲသည်အတိုင်း ပြန်ဆက် ပြန်ကျက်မယ်။ ပိုးဝင်ရင် ကြာမယ်။ အမာရွတ်ဆိုးမယ်။ အသက်ငယ်လေ အနာကျက်တာ မြန်လေ။ ကိုယ်အထက်ပိုင်း အနာတွေက အောက်ပိုင်းအနာတွေထက် ပျောက်တာ မြန်လေ။ လက်ကျိုးတာက ခြေကျိုးတာထက် မြန်တယ်။ မျက်နှာဒဏ်ရာက ခြေထောက်ထက် မြန်တယ်။ ကလေးမီးဖွားပြီးချိန်မှာ အနာကျက်တာမြန်တယ်။
ချုပ်စရာလိုတဲ့အနာကို ချုပ်မှသာ အကျက်မြန်မယ်။ ပိုးမဝင်နိုင်ပါ။ အမာရွတ်သေးမယ်။ ဆီးချိုရှိနေသူ ကြာမယ်။ ခုခံအားကျဆင်းနေသူတွေက ကြာမယ်။ ပိုးသေဆေးလိုမယ်။ အနာသက်သာဆေးလိုမယ်။ ဗီတာမင်စီက အနာကျက်တာ မြန်စေမယ်ပြေတာ အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါ။ ကီးမို့စ်ဆေးပေးတာလည်း သေချာတာမဟုတ်ပါ။ အာဟာရဓါတ် လုံလောက်နေဘို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။ အသားအရေဟာ ပရိုတင်းဖြစ်လို့ ပရိုတင်းနည်းရင်တော့ မကောင်းပါ။
အနာနေရာကို အနားပေးထားရင် အပျောက်မြန်တယ်။ အနာဒဏ်ရာဟောင်းက အမာရွတ်ကြီးနေတာကို ပြန်ပြင်ချုပ်ရင် သေးစေနိုင်တယ်။ ချုပ်တဲ့အခါ အထပ်လိုက်ချုပ်တာ ကောင်းတယ်။ မိန်းကလေးမျက်နှာလို လှပမှုအတွက် ပိုအရေးပါတာမျိုးကို ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်ရင် အမာရွတ်သက်သာစေမယ်။ ချုပ်တဲ့ခွဲစိတ်ကရိယာတွေနဲ့ သုံးတဲ့ကြိုးတွေကို ရွေးချယ်တတ်ရမယ်။ ကိုင်တွယ်ရာမှာလည်း လေးဒီးစ်ဟင်းဆိုသလို ညင်သာနူးညံရမယ်။ လေဆာနည်းကလည်း အမာရွတ်တော့ကျန်နိုင်တယ်။ မိမွေးတိုင်းပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတာ အလွန့်အလွန်ရှားတယ်။
မေးခွန်းတခုထဲမှာ တေလို့ နှစ်ခါထပ်ရေးထားတယ်။ တွေလို့သာရေးရမယ်။ သတ်ပုံအမှားအမာရွတ်လည်း ပျောက်စေချင်ပါတယ်။
5. Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/acne-scars.html
8. Chicken Pox Scars ရေကျောက်အမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/chicken-pox-scars.html
9. Dermavive ဝက်ခြံဆေးဆပ်ပြာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/dermavive.html
10. Keloid အရုပ်ဆိုးတဲ့ အမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/keloid.html
11. Scar (1) အမာရွတ် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-1.html
12. Scar (2) အမာရွတ် (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/scar-2_21.html
13. Scar (3) အမာရွတ် (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-2.html
14. Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/seborrheic-keratosis-or-keratosis.html
15. Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/thigh-acne.html
Highest IQs in History ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ
Genital warts treatment လိင်လမ်းကြွက်နို့ ကုသနည်းများ